August 2017 – Page 5 – wadankaaga.com
Daawo Sawiro South Africa: Muwaadiniin Soomaalieed oo ku dhinteen dab la qabad siiyay goobtooda ganacsi
August 3, 2017	Somali News 0
Falkaan lagu gubay Goobaha ganacsiga oo ay ku dhinteen Alle u naxariiste Cali Maxamuud Cali, Cabdullaahi Cali Ceymooy ayaa waxaa uu dhacay habeenkii Isniinta oo taariikh-da ku beegneyd 31-ka bishii ina dhaaftay ee July, waxaana loo adeegsaday dhalooyin lagu shubo basiinka ee loo yaqaano “Padrol bamb” “sida laga helay muuqaalka …
AKHRISO: Al Shabaab oo Weerar Khasaaro kala duwan dhaliyay ku qaaday Gudaha Kenya.
Dagaalyahano hubeesan oo katirsan kooxda Al Shabaab ayaa xalay weerar xoogan waxa ay ku qaadeen saldhig ciidanka booliiska ku lahaayeen Deegaanka Lafey oo kuyaala duleedka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Weerarkan ayaa la sheegay in Al Shabaab ku dileen ciidamo katirsan booliiska dalka Kenya, waxa ayna Al …
Dalka Qatar ayaa ka maarmay ganacsigii xooganaa ee uu ka heli jiray dalalka Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay shabakad dhaqaalaha ka faalooda oo lagu magacaabo Bloomberg. Warbixinta shabakaddaan ayaa sheegtay in cuna qabateynta dalalka afarta ah ay saareen Qatar inaysan wax saameyn ah ku …
Madaxwene Trump oo Saxiixay Xayiraad lagu soo rogay Ruushka iyo Caro arintaasi ka dhalatay
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay xayiraad cusub la saarayo dowlada Ruushka, kadib markii aqalka Koongareeska dalkaasi uu meel mariyay in cunaqabateyn cusub lagu soo rogo Ruushka. Cunaqabateynta Ruushka la saaray ayaa la sheegay in sabab looga dhigay faragalin uu ku sameeyay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka iyo sidoo …
Daawo Sawiro: Meydadka Ciidamadii AMISOM ee lagu laayay Shabeelaha Hoose oo la geeyay Kampala.
Meydadka Ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa kasoo jeeda dalka Uganda oo lagu laayay axadii lasoo dhaafay sagaal ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la geeyay magaalada Kampala ee Caasimada dalka Uganda. Diyaarad nuuca xamuulka qaada ayaa magaalada Muqdisho ka qaaday meydadka 12-askari oo katirsanaa Ciidamada AMISOM kuwaa oo lagu …
Dhageyso: Askar ku Geeriyootay Diyaarad ku Burburtay Djibouti
Saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada milatariga Djibouti ayaa ku geeriyooday kadib markii ay saakay burburtay dayuurad yar oo ay saaraayeen. Dayuuradan ayaa ku burburtay garoonka dayuuradaha ee magaalada Djibouti. Faahfaahinta dhacdadan waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyeheenna Ramadan Muuse. Source: VOA
AKHRISO: Maamulka gobolka Banaadir oo soo saaray amar cusub ku Saabsan Dhismayaasha Guryaha iyo Gudoomiyayaasha oo Beerta Galay !!!
Maamulka gobolka Banaadir oo maanta kulankoodii todobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan gobolka, iyadoo uu shir guddoominayey Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed. Guddoomiyeyaasha degmooyinka ayaa warbixino ka siiyey guddoomiye Taabit xaaladihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay degmooyinka magaalada, gaar …
AKHRISO: Dowlada Somalia oo soo saartay go’aan ka nixiyey shirkaddo ay heshiisyo kala duwan kula jirtay.
Dowlada Soomaaliya ayaa ka baxday heshiisyo ay kula jirtay shirkaddo gaar loo leeyahay oo wada shaqeyn la leh heyadaha iyo ciidamada dowlada. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka Maaliyada Somalia C/raxmaan Ducaale Beyle 29-kii bishii hore oo loo diray dhamaan heyadaha dowladda Somalia, laguna wargeliyey Madaxweynaha iyo raisul Wasaaraha Somalia …
AKHRISO: Qeybtii ugu horeysay Maxaabiistii Soomaaliyeed ee ku xirneyd dalka India oo la xukumay.
Illaa 15 Maxbuus oo ka mid ahaa 118-ka Maxbuus ee Soomaalida ah ee ku xiran magaalada Mumbai ee dalka India ayaa xukun maxkamadeed lagu riday. Maxaabiistan oo maanta Maxkamadda la soo taagay waxaa lagu xukumay min 7 sano oo xarig ah iyo Ganaax aan badneyn. Waxay hore u xirnaayeen min …
Briton who died fighting IS in Syria ‘killed himself to avoid being captured’
© Provided by The Press Association Lock shot himself in the head rather than be captured (Hampshire Police/PA) A young Briton who died fighting alongside Kurdish forces in Syria killed himself to avoid falling hostage to Islamic State (IS) militants, an inquest heard. Ryan Lock, 20, from Chichester, West Sussex, …